HALKAAN KA AKHRISO WAA WARARKA WARGEYSKA MOGADI SHU TIMES DAILY NEWS PAPER EE MAANTA OO AH KHAMIIS 28 NOVEMBAR 2019-KA
Thursday November 28, 2019 - 10:07:58 in Wararka by Mogadishu Times
WASIIR SABRIYE OO SHALAY KA HADLAY DOORASHADA GALMUDUG Wasiirka Wasaaradda Arrim aha Gudaha dib u heshiisiinta XFS .Cabdi Maxamed Sabr iye oo dib ugu laabtay M/Dhuusamare eb ayaa ka hadlay arrimaha Doora sha
WASIIR SABRIYE OO SHALAY KA HADLAY DOORASHADA GALMUDUG Wasiirka Wasaaradda Arrim aha Gudaha dib u heshiisiinta XFS .Cabdi Maxamed Sabr iye oo dib ugu laabtay M/Dhuusamare eb ayaa ka hadlay arrimaha Doora shada Galmudug. Wasiir Sabriye oo warbaahin ta si kooban ula hadlay ayaa waxaa uu sheegay in Doorashada dowlad Gob oleedka Galmudug dhawaan ay dhicin doonto, isla markaana haat an uu socdo qorshihii ugu dambeeyay ee Door ashada.
Sidoo kale ayaa waxaa uu sheegay in Do orashada Galmudug ay ku dhici doonto sida u gu dhaqsiyaha badan, iyadoona aan loo hakan doonin tabashada Hoggaanka Ahlusunna Walj ameeca ay ka qaban arrimhaas.
Wasiir Sabriye ayaa kal horey hogaanka Ah lusunna uga digay inay caqabad ku noqdaan dhismaha Galmudug Cusub, isagoo xiligaas eedeeyn u jeediyay Hoggaanka Sare ee Ahlus unna.
Weli ma jiro wax xal ah oo laga gaaray Khila afka u dhexeeya Hoggaanka Ahlusunna iyo do wladda Federaalka, kaasi oo ku aadan fulinta heshiis ay horey uga wadeen labada dhinac, kaasi oo ahaa in Baarlamaanka Cusub ee Gal mudug Ahlusunna laga siiyo 35 Xildhibaan.
Si kastaba Guddiga farsamada maamul dhisida Galmudug ayaa dhawaan ku dhawaa qay in Doorashada Madaxweynaha Cusub ee Galmudug ay dhici doonto inta u dhexeeysa 1723ka Bisha soo socota ee Dec. 2019.
SHEEKH SHARIIF OO KULAN LA QAATAY MA DAXWEYNAHA DALKA JABUUTI
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna Gu ddoomiyaha Madasha Xisbiyada Qaran She ekh Shariif Sh Axmed iyo wafdi uu hogaami naayo ayaa Shalay gaaray dalka Jabuuti, iya goo halkaas lagu soo dhaweey ay.Socdaalka Sheekh Shariif ee Jabuuti ayaa waxaa ku wehlinaya Xoghayaha arri aha dibadda Himilo Qaran Senator Ilyaas Cali Xasan iyo Danjire Cabdirisaaq Shoo lle oo kamid ah xubnaha sare ee Xisbig, waxaana Garoonka diyaarad aha dalkaas kusoo dhaweeyay Madax ka tir san Jabu uti. Guddoomiyaha Madasha Xisb iyada Sh.Shariif ayaa kulan la qaatay Madax we ynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, iyag oo ka wada hadlay xaaladihii ugu da mbeeyey ee dalka.
Sidoo kale Sheekh Shariif ayaa waxaa uu sheegay in Madaxweyne Geelle uu war bixin ka siiyay aragtida Xisbiga Himilo Qar an ee dhismaha dowladnimada iyo doora shada la filayo 2020/2021. "Dalka aan walaalaha nahay ee Jabuuti ma dax iyo shacab waxaan uga mahad celi nay naa markasta doorkooda muuqda ee dib u dhi skii dowladnimadii naga burburt ay” ayuu yiri Guddoomiyaha Madasha Xisbiyada Qaran.
Kulanka Sheekh Shariif uu la qaatay Madax weynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxaa qeyb ka ahaa safiirka Jabuuti ee Soom aaliya Amb Aadan Xasan Aadan.
MAAMULKA G/BANAADIR IYO SARAAKIISHA CXD OO KA SHIRAY LADAGAALANKA ALSHABAAB
Guddoomiyaha G/Banaadir ahna duqa M/ Muqdisho Md.Cumar Maxamud Maxam ed (Cum ar Fin ish) ayaa xarunta degmada Deyn iile kulan ga ar ah kula qaatay saraakiisha Cii damada Xoo gga dalka, isagoo kala hadlay xoojinta la dag aalanka Alshabaab.
Kulankan amniga Caasimadda quseeya ay aa waxaa goob joog ka ahaa xildhibaan Cabdu llaahi Gaafow oo horey usoo noqday Taliyaha ciidanka NISA iyo xubno kale oo ka tirsan ma amulka Gobolka Banaadir.
Duqa M/Muqdisho Cumar Finish ayaa ku ammaanay ciidanka xooga dalka Soomaaliye ed iyo saraakiishooda sida ay naftooda ugu horeyn xureynta dalka iyo badbaadinta shaca bka.
ITOOBIYA OO KA WALAACSAN ‘KULAN AY AGA AS INTAY KENYA’ OO NAIROBI KU DHEX MAR AY AXMED MADOOBE IYO MADEY
D/Itoobiya ayaa walaac ka muujisay ku lan ay abaabushay Kenya oo Nayrobi ku dhex maray madaxweynaha Jubaland Ax med Mado obe iyo hoggaamiyaha ONLF Cabdiraxmaan Mahdi Madey, waxaa sida as qoray wargeyska Addis Standard.
Kulanka ayaa waxaa si gaar ah u agaasi may, fududeeyey, islamarkaana lacag ku bixiy ey Machadka Rift Valley ee Kenya.
Xiisadda Jubaland iyo Itoobiya ayaa sa re usii kaceysay wixii ka dambeeyey bishii Au gust, ka hor doorashadii A.Madoobe, markaasi oo mas’uulinta Jubaland ay dii deen inay gar oonka Kismaayo ka degto di yaarad ay saarnaayeen agab iyo ciidamo Itoobiyan ah.
Jubaland ayaa sidoo kale toddobaad ka hor cabasho ka muujisay farogelin xoo gan oo ciidamada Itoobiya ay ka wadaan G/Gedo, ayaga oo taageeraya madaxwe yne Farmaajo.
Hoggaamiyaha ONLF, C/maan Mahdi Ma dey ayaa bishii August, ka hor inta aan xilkan loo dooran waxa uu ra’iisul wasaare Abiy Ahmed uga digay farogelinta Jubal and.
"Kismaayo waxay ku taalla goob muhiim ah. Haddii halkaas isbeddel uu ka dhaca na waxay saameyn doontaa waddanka oo dhan.
Waxaan aaminsanahay in Ax.Madoobe uu shaqo wanaagsan qabtay. Mana hubo in haddii dad kale ay meesha yimaadaan uu amn iga sidan sii ahaan doono. Waxaan ka baqa yaa haddii aynan ka fiirsan farogelinta hal kaas, inay saameyn doonto gob olka oo dhan, sababtoo ah waxaa jira ciid an cadow ku ah Itoobiya, oo Axmed Mado obe uu hadda la dagaalayo.”
Lama yaqaan ujeedka iyo waxa looga hadl aya kulanka kulanka Nayrobi ee Axm ed Mad oobe iyo Cabdiraxmaan Mahdi, si da uu qoray Addis Standard. Dhinaca kale, sarkala sare oo ku dhow mad axweyne Ax.Madoobe ayaa beeniyey inuu wax kulan ah ka dhaay Nayrobi.
"Joogitaanka hogaamiyayaasha Jubal and iyo ONLF ee Nayrobi waa mid isku aaday oo kaliya. Ma jiro wax kulan ah oo dhacay, haddii ay kulmaanna waxay no qon doon taa kaliya inay isa salaamaan.” Ayuu yiri.
SOMALILAND OO KA HADASHAY ISBEDEL LA SHEEGAY INUU KU YIMID XIRIIRKII KALA DHAXEEYAY ITOOBIYA
Somaliland ayaa markii u horeysay ka ha dashay isbedel la sheegay inuu ku yi mid xid hiidhkii kala dhaxeeyay dowladda Itoobiya, isla markaana ay Xukuumadooda ay walaac qabto.
Xukuumada Somaliland ee uu hogaam iyo Madaxweyne Biixi ayaa sheegtay ina ysan wax ba iska badalin xidhiidhka Somal iland kala dhaxeeya dowladda Itoobiya, mi daasi oo ay ku beeninayso warbixin dhow aan uu daabac ay Wargeysa ka soo baxa Itoobiya.
Wargeyskaasi ayaa sheegay in Somalil and ay aad uga walaacsantahay isbedelka uu siya asadii dowladda Itoobiya ka same eyey Raysul wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed.
Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon, Wasi irka arrimaha dibeda Somaliland, oo arrint aasi ka hadlayey ayaa warbixinta wargey skaasi ku tilmaamay mid aan xaqiiqda ku saleysneen oo malo awaal ah.
"Hadalkaasi markii aanu baadhnay sid uu ku soo baxay waxay iska ahayd si shee ko ah oo aan ujeeddo ahayn wax si ras miya uga baxay wasaaradda oo uga wara mayey may ahayn wax kala fogaansho ah iyo wax ka bedelmay xidhiidhkii hore ee fii cnaa ee Itoobiya iyo So maliland u dhexee yey ma jirto” ayuu yiri Was iir Yaasiin Farat oon. Wuxuuna intaas kusii daray Wasiirku "Cid iska indho tiri karta jirite enka Somali land ma jirto, dadka ka shakiyey shirarkii madaxweynaha Soomaaliya, ka Eritre ya iyo Ra’isal wasaaraha Itoobiya ku shiri jire en ee u qaatay inay khatar ku tahay Som aliland waxba kama jiraan, waayo ee gob olka saddexdaas dal uun maaha oo dalal kale ku yaalla”.
Wasiirka ayaa ugu dambeyntiina waxa uu beeniyay in dowladda Itoobiya kala laabatay wakiilkeedii Hargeysa, taasi oo uu sheegay in uu Safiirka Itoobiya ee Harg eysa uu gaadhay da’dii howlgabka, isla markaana ay dowladda Itoobiya badelkiisa diyaarineyso.
SOMALILAND OO AMMARO KASOO SAARTAY SHI RARKA LAGU QABTO HOTELADA HARGEYSA
Maamulka Somaliland ayaa Shalay soo saa ray Amarro ku socda maamulada hotelada ku yaalla Magaalada Hargeysa, kaasi oo la xiriira Shirar iyo Xafladaha lagu qabto hotelada.
War qoraal ah oo ka soo baxay maamulka Go bolka Maroodijeex ee Somaliland ayaa waxaa lagu sheegay in shirar ama Xaflad uusan u ogeyn Somaliland aan lagu qabin karin hotel ada ku yaalla Magaalada Hargeysa.
Dhinaca kale Maamulada hotelada ayaa wa xaa lagu amray inay fuliyan Amarka soo bax ay, isla markaana ay soo wargeliyan hadii ay jiraan barnaamijyada la mamnuucay. Arrintan ayaa kusoo aadeysa, iyadoo mararka qaar M/ Hargeysa ay ka dhacaan shirarka siyaasadde ed ee xisbiyada siyaasada iyo dadka kale
GUDDOOMIYIHII HORE EE BARLAMAANKA PUNTLA ND OO WELI KU JIRA GADOOD KA DHAN AH XILKA QAADISTISII
Guddoomiyihii hore ee barlamaanka dowl ad goboleedka Punt land, Cabdixak iin Maxamed Axmed (Dhoobodaareed), ayaa weli ku ji ra ga dood ka dhan ah xil kii laga tuuray, isagoo kulamo wada tashi ah ka wada gobolka Sana ag oo uu ku sugan yahay tan iyo markii xilka laga tuuray.
Xildhibaan Dhoobo ay aa lagu eedeeyay in uu halkaas ka wado aba abul ka dhan ah mi dnimada Puntland iyo sidii Gobolada Sanaag iyo Sool u dhisan lahaayeen maaamul ka mad ax banaan dowlad gobol eedka Puntland. Guddoomiyihii hore wax aa uu weli aaminsan yahay inuu yahay gu ddoom iyaha sharciga ee barlamaanka, isa goo tilma amay in si afduub ah oo dhiig uu ku daatay looga tuuray xilkiisa.
Xildhibaano iyo saraakiil ciidan oo kati rsan Puntland ayaa dhawaan xildhibaan Dhoobo u gu tagay magaalada Xingalool waxayna la ye esheen kulan gaar ah oo aan weli warbaahintu macluumaad ka helin.
Dad u badan xildhibaano iyo siyaasiyiin ku sugan Garowe, ayaa guddoomiyihii ho re ee barlamaanka Puntland kula taliyay in uu kasoo laabto gadoodka uu ku jiro isla markaana uu furto dacwad ka dhan ah habkii loo maray moo shinkii lagu riday.
Weli madaxda sare ee Puntland kama had lin xil ka qaadistiisa inkastoo madaxwe ynaha Pu ntland, Siciid Deni uu muujiyay in uu ka xun yahay khasaarihii ka dhashay shaqaaqadii ka
dhacday xarunta barlamaankan.
DOWLADDA OO MUDDO KADIB DIB U BILAA WDAY DHOOFINTA MOOSKA SOMALIYA
Wasiirka Beeraha Soomaaliya oo ay wehliye yn Wasiir ku xigeenka Dekedaha, gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga, Xubno ka socd ay mashruuca GEEL ,
Ganacsato iyo masuuliyiin kale ayaa Maan ta muddo afar sano ah kadib si ras miya u daahfuray dhoofinta Mooska oo ka mida dal agyada wax soo saar ee ugu bad an ee dal keena laga dhoofin jiray loona iib geyn jiray dal al kala duwan, iyadoo laba konteenar oo horu dhaca ama tijaabo ah oo ay hubinta tayadooda iska kaashadeyn Wasaaradda Beeraha iyo Shirkadda GE EL Project ay ganacsato Soo maaliyeed oo kaashanaya wasaaradda beer aha u dhoo fiyeen dalka Sacuudiga.
Md, Saciid Xuseen Ciid oo ka hadlay muna asabadda daahfurka dhoofinta Moos ka oo ka dhacdayDekedda weyn ee M/Muqdisho ayaa sheegay in shaqadan ay qeyb ka tahay qor shaha ay dowladu ku Dhiirigalineyso wax soo saarka dalka, wu xuuna beeraleyda Soomaali yeed ugu baa qay inay kordhiyaan wax soo saarkooda si uu dalku u gaaro isku filnaansho dhanka cuntada ah oo dhameystiran.
Mooska oo ka mida dalagyada wax soo saar ee ugu badan ee dalkeena laga dho ofin ji ray ayeey soo celinta iibgeentiisu wa xey faa ’iida weyn u tahay dhaqaalaha dalkeenna oo hadda ku jira soo kabasho wanaagsan.
MUUSE BIIXI OO LA KULMAY GUDDIGII HORE EE KOMISHANKA DOORASHOOYINKA
Madaxweynaha Somaliland, Md. Muuse Bi ixi Cabdi, ayaa Shalay kulan xafiiskiisa kula qaatay guddidii hore ee komishanka door ashooyinka oo muddoxileedkoodu dhamaana yo 29112019ka,
waxana madaxweynaha kulanka ku weh elinayey madaxweynekuxigeenka Somali land, Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ism aaiil (Saylici) iyo G/yeyaasha goleyaasha guur tida iyo Wakiillada, Saleebaan Maxamuud Aad an iyo Md.Baashe Maxamed Faarax.
Kulankan dhex maray Madaxweynaha iyo shirguddoonka goleyaasha guurtida & wakiilla da iyo xubnaha Komishankii hore ee doorash ooyinka ayey ujeeddadiisu ahayd isxogwara ysi la xiriira sidii xilkasnimada iyo hufnaanta la hayd ee ay u guteen waajibaadkii ee saarnaa, una qabteen diiwaangelintii codbixiyayaasha iyo doorashadii madaxtooyada.
Xubnaha Komishankii hore ee Doorashooy inka, ayaa madaxweynaha iyo shirguddoonka goleyaasha guurtida iyo wakiillada uga maha dceliyey kulanka ay la qaateen, waxana ay til maameen in shaqadii ay soo qabteen ahayd masuuliyaddii loo igmaday iyo waajibaad oo ay u guteen si Dastuuri ah.
NINKII SOOMAALIGA AHAA EE TOORRIDA WEERAR KA KU GEYSTAY OO LA XUKUMAY
Nin Soomaali ah, oo isku dayay inuu dilo 3 ruux, oo uu ku jiray askari ka tirsan boo liska Britain ayaa la gu riday xukun xab si daa'in ah.
Mahdi Maxmuud ayaa falkaas ku gey stay weerar uu too rri u adeegsaday oo ka dhacay goob taree nn ada laga raaco oo ku taalla M/ Manchester.
Ninkan 26 jirka ah, ayaa toorri la dhacay la mmaane wada socday, ka dibna wuxuu weerar ay askari lagu magacaabo Lee Valentine, oo ka howlgalayay Manchester Victoria, dabaya aqadii sannadkii lasoo dhaafay.
Waxaa horay loogu sheegay in 11 sano oo xabsi ah lagu xukumi doono ka dib markii uu qi rtay saddex nooc oo dambi ah, oo dhammaan tood la xiriira isku day dil iyo fal argagixisanimo ah.
Maxkamadda Manchester Crown ayaa ku dhawaaqday xukunka.Maxamuud ayaa marka hore lagu xiri doonaa meel ka mid ah isbitaal amnigiisa si weyn loo adkeynayo.
Garsoore StuartSmith, oo ku dhawaaqay xukunka ayaa sida ay wax u dhaceen u shee gay Mahdi, oo daggan xaafadda Cheetham Hill ee magaalada Manchester, wuxuuna ku yiri ; "Waxaad adigoo si daggan ugu dhex socda go obta tareennada laga raaco aragtay lammaan aha".
"Kadib waad daba raacday, waxaad lasoo baxday mid kamid ah toorriyahaaga waadna ku weerartay. Waxaad weerartay adigoo dama csan inaad disho", ayuu yiri garsooraha.
Mahdi ayaa ninka dhowr jeer toorrida uga dhuftay dhabarka, garbaha iyo madaxa, hawee neydii la socotayna wuxuu uga dhuftay wajiga, ka hor inta uusan weerarin askariga, oo isku dayayay inuu ka qabto.
Garsooraha ayaa sheegay in dhibaatooyin dhinaca maskaxda ah ay ninkan u horseedeen inuu ku fikiro arrimo jihaadi ah, laakiin uu qaad an karay mas'uuliyadda buuxda ee weerarka uu geystay.
Maxamuud ayaa marka isbitaalka laga saa ro loo gudbin doonaa xabsi uu noloshiisa ku dhameysan doono.
Maxkamadda ayaa horay loogu sheegay in Maxamuud uu daba socday lammaanaha, oo da'dooda lagu sheegay 50meeyo, abaare sa acaddu markii ay ahayd 21:00 GMT, 31kii bi shii December.
Wuxuu ku dhawaaqay erayada "Allahu Akbar" iyo "ha noolaado khaliifada", kadibna wuxuu ku weeraray toorri.
13 dhaawac oo ninka haweeneyda la socday soo gaaray ayaa waxaa ka mid ah jab, halka haweeneydana dhaawaca wajigeeda ku dhac ay uu gaaray ilaa lafta.
Mr Valentine, oo 31 jir ah ayaa rasaas ku ri day Mahdi, balse waxay ku hakatay jaakad diisa, mana aysan curyaaminin.
Middi kale oo nooca jikada lagu isticmaalo ah ayaa laga helay Mahdi jeebkiisa, booliska Ma nchester ayaana sheegay inay sidoo kale ka heleen waxyaabo badan oo muujinaya fikrad aha argagixisada.
Maxamuud, oo heysta dhalashada Nether lands, asal ahaanna kasoo jeeda qoys Soom aali ah, ayaa UK tagay isagoo 9 jir ah, waxa ana lagu xagjireeyay dhinaca internetka, sida ay booliska ku warrameen.
Det Supt Will Chatterton ayaa yiri: "Kani wuxuu ahaa weerar argagax leh oo dhacay mid ka mid ah maalmaha ugu mashquulka ba dan sanadka waana ogahay in dadka waxyee lladu gaartay ay waligood xasuusnaan doon aan arrintaas.
"Shaki kuma jiro waxa dhici lahaa haddii uu Maxamuud adeegsan lahaa middida weyn ee ku jirtay jeebka jaakaddiisa".
Maxamuud aabihiis, oo warqad u diray gars oorka maxkamadda, ayaa sheegay in qoyski isu ay dadka dhaawacmay u duceynayeen tan iyo markii uu dhacay weerarka "argagaxa" leh, wuxuuna sheegay inuu aad uga mahadcelin ayo jawaabta degdegga ah ee ay ciidanka amnigu bixiyeen.
Wuxuu intaas ku daray in qoysku ay aad u ga "argagaxeen", ayna "naxdin weyn" daree meen markii ay maqleen waxa uu wiilkiisa sam eeyay, isagoo sheegay in haddii uusan dhiba ato dhinaca maskaxda ah qabin uusan sam eyn lahayn ficil noocaas ah. BBC
DOWLADDA SOMALIYA OO KA QEYB GASH AY SHIRWEYNE MUHIIM AH OO KA SOCDA GENEVA
Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada XFS,Md. Sadiiq Xirsi Warfaa ayaa khudbad ka jeediyay shirka caalamiga ah ee looga hadlayo arrimaha daryeelka bulshada oo ay soo qaban qaabisay hay’adda shaqaalaha adduunka ee ILO, kaa oo ka socda magaalada Geneva ee dalka Switzerland.
Wasiir Warfaa ayaa khudbadiisa diiradda ku saaray dadaallada ay DFS ku dooneyso in si isku mid ah loo gaarsiiyo bulshada Soomaa liyeed barnaamijka Daryeelka bulshada oo waara.
"Iyadoo aanu taageero ka helayo bahwa dagteenna horumarinta, waxaan bilownay qaar ka mid ah mashaariicda horumarinta ee aad muhiimka u ah si aan u hirgalinno Nidaam dary eelka Bulshada – oo waafaqsan Xeerka Darye elka Bulshada ee Qaranka…Marka laga hadl ayo awoodda maaliyadeed, waxaan ku farax sanahay in bishii Luulyo 2019ka Guddiga fu linta ee hay’adda lacagta adduunku (IMF) ay kulmeen si ay u soo gabagabeeyaan la tashiga qodobka 4aad ee ku saabsan Soomaaliya. Wa xay ku heshiiyeen in siyaasadaha dhaqaalaha iyo qaabdhismeedkeeda ee hoosta looga qee xay SMP 4aad – ay buuxiyeen heerarka siy aasadaha ee la xiriira qorsheynta deynta sare.”
”Xafiiska Ra’iisul wasaaraha (tubtiisa Hor umarinta Bulshada iyo Horumarinta Dhaqaala ha) ayaa horey u muujiyay in maalgashiga waa xaha bulshada, gaar ahaan daryeelka bulsha da iyo biyuhu ay heli doonaan qoondeyn miis aaniyadeed oo ballaaran ka dib deyn cafinta.” ayuu yiri wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulsh ada.
Wuxuu rajo wanagsan ka muujiyay dadaal lada socda ee deyn cafinta ee guulaha laga ga aray inay dhammeystirmaan , taas oo uu shee gay inay horseedeyso horumar dhaqaale iyo isku filnaasho uu dalku gaaro.
"Iyadoo la tixraacayo Siyaasaddeena Dary eelka Bulshada ee Qaranka, Dowladda Soom aaliya waxaa si buuxda uga go’an inay horum ariso hannaan Daryeelka bulsho ee waara – waxaanunaka faa’iideysan doonaa dhamm aan kheyraadkayaga oo aanu u adeegsan do ono sidii loo hubin lahaa in la gaaro Ma bda’a ‘Cidna inaan laga tagin’ iyadoo looga faa’iidey nayo inta nugul marka hore.” ayuu ku daray.
Shirkan ayaa waxaa ka qeybgalaya wasiirro, wakiillo iyo hoggaamiyaasha ururro caalami ah,iyadoo Soomaaliya ay ku matalayaan wafdi uu hoggaaminayo wasiirka Shaqada iyo Arrim aha Bulshada.
XUKUN DIL AH OO LAGU RIDAY RAG WEERAR DHALIYEY KHASAARO NAFEED KA FULIYAY DHAKA
Maxakamadda u gaar ah falalka argag ixiso oo ku taalla dalka Ban gladesh ayaa dil toogasho ku xukuntay toddobo xubnood oo ka tirsan koox mintidiin Islaami ah oo dalkaas laga mam nuucay. Kooxdan ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen weerar lagu qaaday maqaayad ku taalla magaalada Dhaka, oo ay ku dhinteen 22 qof, oo badankood ahaa ajaanib.
Dacwad oogeyaasha ayaa markii xukunka la gu dhawaaqay kadib warbaahinta u sheegay ina eedaha loo heystay toddobada qof ee min tidiinta ah lagu caddeeyey, ayada oo uusan wax shaki ah ku jirin.
Saraakiisha maxakamadda ayaa sheegay in mintidiintan ay ku lug lahaayeen qorsheynta weerarka.
Qof sideed oo lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa weerarka, ayaa dambi lagu waayey.
Shan mintidiin ah oo ka tirsan kooxda JamaatulMujahideen ayaa maqaayadda weeraray 1dii July 2006, kadibna afduubtay dadkii ka cunteynayey kuwaasi oo ay dileen kadib ismarin waa socda 12 saacadood.
Sagaal qof oo Talyaani ah, toddoba Japan ese ah, qof Mareykan ah iyo Indi ah ayaa ku dhintay weerarka. Shantdii qof ee weerarka soo qaaday ayaa waxay sidoo kale ku dhint een dagaal ay la galeen ciidamada kumando oska.
BEESHA CAALAMKA OO KA HORTIMID MUD DO KORDHINTA GOLAYAASHA SOMALILAND
Beesha Caalamka ayaa Shalay war ay soo saartay ku sheegtay inay ka walaacsan yih iin go’aankii uu Golaha Guurtida ee Somaliland 24kii bishan muddo laba sano ah ugu kordhi yay waqtiga Golaha Wakiilada.
Warsaxaafadeedkan ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu sheegay in heshiiskii ay xi sbiyada Somaliland gaareen bishii July ee san adkan uu ahaa mid ahmiyad leh oo lagu go’aa miyey in la qabto doorashooyinka xubnaha baarlamaanka iyo kuwa golaha deegaanka iyo in lagu heshiiyay in doorashooyinkaas lagu qabto sida ugu dhaqsa badan ee suurtogal ah, siyaasad ahaan iyo farsamo ahaanba.
"Waxaan ka walaacsanahay in dhacdoo yinkan ay si aad ah u wiiqayaan heshiisyadaas taasi oo dhaawacaysa sumcadda dimuqraadiy adda Somaliland. Sidoo kale, waxaan si aad ah uga walaacsanahhay dhacdooyinka uu xarr igu ka mid yahay oo u muuqda kuwa aan shar ciyad laheyn iyo xayiraadaha sii kordhaya ee xoriyadda hadalka” ayaa lagu yiri warsaxaafa deedka.
Qoraalka ayaa intaas ku daray "Si gaar ah ayaan uga walaacsanahhay go’aanka ay gol aha Guurtidu muddo xileedkii ugu kordhiyeen labada aqal ee Baarlamaanka oo Golaha Wak iilada loo kordhiyay ilaa bisha January ee 2022ka iyo Guurtida ilaa bisha January ee 2023ka.” "Labadan aqal ee loo aasaasay iney matal aan shacabka reer Somaliland ayaa kuraasto oda fadhiya muddo aad u dheer, taasi oo ka soo horjeeda heer kasta oo dimuqraadiyadeed ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka. Gol eyaasha deegaanku waxay shaqeynayeen iya goo aan haysan sharciyad ilaa bishii april ee sanadkan ayay sii raaciyeen hadalkooda.”
Qoraalkan ayaa lagu yiri, waxaan ugu yeer eynaa dowladda, iyo jilayaasha siyaasaddaba iney dib u xaqiijiyaan heshiisyadii soo jireenka ahaa, ayna la yimaadaan isafgarad, iyo tana asul si ay xal uga gaaraan jahwareerka siyaas adeed ee taagan islamarkaana suurtogeliya in doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka iyo kuwa golaha deegaankaba lagu qabto xill igii la qorsheeyey ee ah dhamaadka sanadka 2020ka aysanna dhicin wax dib u dhigis ah.”
Ugu danbeyn qoraalka ayaa lagu yiri, "Waxaan bogaadineynaa dedaalada dhexdhexaadineyd ee soconaya, waxaana hoosta ka xarriiqeynaa in si aan u taageerno hanaanka doorashada, waa in ay ahaataa mid hrmarineysa siyaasad loo dhan yahay iyo intiraam buuxa oo sharciga ah. Waxaa loo baahan yahay in la helo Guddi Doorasho oo hanta aamminaadda dhamaan dhinacyada siyaasadeed iyo midda shacabka Somaliland. Kaliye hay’ado qaran oo si dimu qraadiyadi ku jirto loo doorto ayaa keeni kara horseedi kara horomarka ay shacabka Soma liland mudan yihiin.
WABIGA SHABEELLE OO KU FATAHAY DEGMADA AFGOOYE IYO DEEGAANO KALE
Wararka aan ka heleyno Degmada Afgooye ee G/Shabeellaha Hoose iyo deegaano hoo staga ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaas saacadihii la soo dhaafay fatahaad uu ku sam eeyay Wabiga Shabeelle.
Xaafadaha ka tirsan Degmada Afgooye ee ku fatahay Wabiga waxaa kamid ah Baanguri iyo damaley, isla markaana waxaa biyaha Wa biga uu saameeyay dad u badan Beeraleey.
Guddoomiyaha G/Sh/Hoose Ibraahim Aad an Cali Najax oo kormeer ku tegay goobaha uu ku fatahay Wabiga ayaa waxaa uu sheegay inay wadaan dadaalo lagu xirayo biyaha Wab iga Shabeelle ee kusoo fatahay Afgooye.
Sidookale Guddoomiye Najax ayaa waxaauu u tilmaamay inay xireen ilaa 4 meel oo biy aha Wabiga ay soo jabsadeen, isla markaana uu weli socdo gurmad xoogan.
Waxaa kaloo Guddoomiye Najax ugu baaq ay Guddiga Gurmadka Dowladda Federaalka iyo kan Koonfur Galbeed inay ka qeyb qaatan gurmadka loo saameynayo dadka uu Shabeel laha Hoose ku saameeyay fatahaada Wabiga.
Si kastaba saacadihii la soo dhaafay Gobo lada ayaa waxaa siweyn uga da’ay roobka de yrta, waxaana deegaano badan uu dhigay bi yo, iyadoona dadka iyo duunyada ay ku diir sadeen.
XILDHIBAANADA 2DA AQAL EE BAARLAMAAN KA OO LOO QEYBIYAY SHARCIGA DOORA SHOOYINKA
Xildhibaanada 2da Aqal ee Baarlamaanka FS ayaa Shalay oo Arbaco ah mar kale kulan wadajir ah ku yeeshay Xarunta Villa Hargeysa ee Magaalada Muqdisho.Xildhibaanada 2da Aqal ee G/Shacabka iyo Aqalka Sare ayaa kul anka loogu qeybiyay sharciga doorashooyinka heer federaal oo dhawaan diyaarintiisa lasoo gabo gabeeyay.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa kal hore soo gudbiyay sharcigan, hayeeshee waxaa loo xilsaaray xubno ka tirsan Golaha Shacabka, ku waasi oo dib u eegis iyo wax kabal ku samee yay sharcigan Shalay loo qeybiyay Xildhibaa nada labada Aqal.
Sidoo kale Xildhibaanada ayaa sharcigan soo Akhrisan doona muddo labo cesho ah, iya goona dood dheer ka yeelanaya Ansixinta sharcigaas.
Kulankii Shalay wadajirka ayaa waxaa Shir Guddoomiyay Guddoomiyeyaasha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdir axmaan iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi, waana kulankii labaad oo si wadajir ah ay u yeeshaan Xildhiba anada labada Aqal ee dalka.
WARBIXINTA LAGA DIYAARIYAY SHARCIGA DOORA SHOOYINKA QARANKA EE HEER FEDERAAL
Guddiga KMG ah ee diyaarinta Sharci ga Doorashooyinka Qaranka ayaa Shalay ka hor akhriyay Golaha Shacabka Warbixi nta Shar ciga doorashooyinka Qaranka ee Heer Feder aal, kaasoo u gudbay Akhrinta Labaad.
Warbixinta oo ka koobneyd lix bog ayaa wax aa ku lifaaqneyd sharciga doorashooyi nka oo loo qeybiyay Xildhibaanada, iya doo lagu sam eeyay wax ka bedel badan qaabkii ay Xukuum adda u soo diyaarisay ee aan waafaqsaneyn Dastuurka.
Sidoo kale warbixinta Guddiga ayaa waxaa ku jirtay la tashiyo uu ka soo same eyay dow lad goboleedyada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaana dham maan warbixinta ku caddaa natiijada kul amada Guddiga soo waday ee la xiriiray la tashiyada sharcigan.
Qodobada Guddiga wax ka bedelka ku sameeyay ayaa ahaa inuu meesha ka saa ray hannaanka doorashada ee nidaamka Mete laada isu dheelitiran ee Liiska xiran (Proport ional representation closed list), kaasoo ahaa mid dhaliyay doodo kala duw an, gaar ahana sida la isku waafajin karo awood qeybsiga 4.5.
Sidoo kale Guddiga ayaa qaatay Nida amka Aqlabiyada badan (Majoritarian Syst em) kuna salaysan in kursi kastaba gaar kiis loo doorto (Single Member popularity "SMP”) ama habka loo yaqaan horreeyaa guuleysta (First Past The Post "FPTP”) oo lagu kala baxo cod ka haldheeriga ah ee tartanka kursi deeg aanka.Halkan hoose ka akhriso Warbixinta Guddi ga ka soo diyaariyay sharciga doorasho oyinka.:
WARBIXINTA GUDDIGA KMG EE SHARCIGA DOORA SHOOYINKA – FINAL
Golaha Shacabka Soomaaliya Guddiga KMG ee Diyaarinta Sharciga Doorashooyinka Qaranka Taar iikh: 19ka Nofeembar, 2019 Ku: Guddoomiyaha Golaha Shacabka Ku: Dhamaan Xubnaha Golaha Shacabka Ujeeddo: Warbixinta Guddiga ee Sharc iga Doorashooyinka Qaranka ee Heer Federaal oo u gudbaya akhrinta 2aad. M.ne Guddoomiye, Mud anayaal Guddiga kmg ee diyaarinta Sharciga Door ashooyinka Qaranka waxaa la magacaabay 20kii Luulyo 2019 si waafaqsan Qodabka 63(b) ee Dast uurka iyo Qodobka 33(5) ee XeerHoosaadka Gol aha Shacabka, si ay u soo diyaariyaan Sharciga Doorashooyinka Qaranka oo ay soo gudbisay Xuk uumadda warqadda tixraaceeddu yahay XRW/ 0285/05/2019 ee 02/05/2019, Sidoo kale waxaa lag u qeexay waajibaadka shaqo ee Guddiga "Terms of Reference) warqadda tixraaceeddu yahay Ref: 67/12/01/B10/19 kana soo baxday Xafiiska Gud doomiyaha Golaha Shacabka, ujeedkeeduna ahaa Waajibaadka Shaqo ee Guddiga kmg ah ee Diya arinta Sharciga Doorashooyinka Qaranka. (eeg lifa aqa). M.ne Guddoomiye, Mudanayaal Si looga gun gaaro waajibaadka shaqo loona fuliyo waajibaadka loo igmaday guddiga waxuu sameeyay xog iyo talo uruurin balaaran, isagoo tashiyo la yeeshay qayb aha kala duwan ee bulshada iyo saamilayda siy aasadeed. waxaa ka mid ahaa shaqada guddiga in uu dhageysto dhammaan cidda ay khuseyso (st ake holders) sharciga iyo cid walba oo aan looga maa rmin tayeynta Sharciga oo ay ka mid yihiin GMDQ, Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Gobolka Banaadir, Dowlad Gobolleedyada, Ururada Bulshada Rayidka qaybaheeda kala duwan, Hay’adaha Amniga, Waki illada xisbiyada siyaasadda, Odeydhaqameed iyo xildhibaano qaar oo ka soojeeda Somaliland, Kutlad da Haweenka Labada Aqal ee Baarlamaanka, Dal adaha Waxbarashada iyo qaar ka mid Jaamacada ha Dalka, Machadka Cilmibaarista ee Heritage, Madasha Aayotalis, Hay’adda Max Planck, IRI iyo Creative oo labaduba hoostaga USAID, IESG oo ka tirsan UNka iyo Electoral Institute for Sustainable Democracy to Africa "EISA”. M.ne Guddoomiye, Mu danayaal Laga bilaabo markii la magacaabay g uddiga, Guddigan wuxuu yeeshay 61 kulanshaqo oo kala ah: 29 (Sagaal iyo Labaatan) Kulan uu ku yeeshay magaalada Muqdisho; 20 (Labaatan) Kul an uu ku yeeshay Dowlad Gobolleedyadda xubnaha ka ah Dowladda Federalka iyo 12 (Labo iyo Tobb an) Kulan uu ku yeeshay Dalka Djibouti. Tell: +252 (0) 615548235 Email: election.committe e@parli ament.gov.so website: www.parliament.gov.so M.ne Guddoomiye, Mudanayaal Qorshohowleedkii Gud diga u degsanaa waxaa ku yimid dibudhac aay sababeen daruufo jiray, hase ahaatee guddigu wax uu codsaday taariikhdu markay ahayd 6dii Oktoober 2019, waqti kordhin kooban si uu usoo dhamaystiro sharciga doorashooyinka, warbixinta iyo waxii kale ee talo soo jeedin ah. Kullamada u Kuur Gelidda ee Guddiga.
1. Guddigu waxa uu Wasaaradda Arri maha Gudaha su’aalo ka weydiiyey kana codsaday inay faahfaahin waafi ah ka bixiyaan qodobada uu ka kooban yahay Hindise Sharciyeedka Doora sho oyinka, nidaamka doorashada (model) iyo sida lagu hirgelin karo.
2. Guddiga waxa uu dhowr kulan la qa atay, wada tashi dheerna la yeeshay, su’aalo bada nna weydiiyey Guddiga Madaxbanaan ee Doora shada Qaranka taas oo uu ugu kuurgalayey udiyaarsanaanta guddiga ee dhinacyada awoodda helitaanka howlwadeeno tababaran, dhaqaale, agab iyo imkaaniyaat kale ee ay ku maamuli karaan doorasho qof iyo cod ah iyo sida ay uga gudbi karaan wixii caqabada ah ee ka hor imaan kara habsami u fulidda maamulka doorashada 2020/2021. Guddigu waxa uu GMDQ wax ka weydiiyey sida u arkaan qodobada ku xusan sharcigan kana dhagaystay ra’yigooda.
3. Guddiga waxa uu Hay’addaha Cilmi baarista ee kor ku xusan ka codsaday inay baaris iyo isbarbardhig ka sameeyaan Nidaamyada Doorasho ee kala duwan ee dunida ka jira, iyo inay soo bandhigaan mid waliba wanaaggiisa iyo dhaliilahiisa si loo eego kan ugu haboon ee la jaanqaadi kara marxaladda dalkeena. 4. Guddiga waxa uu la kulmay hay’adda IESG ee kor ku xusan waxa uu wada tashi kala yeeshay Qodobada Sharcigan, ka dhagaystay waa yo aragnimadooda nidaamyada doorashooyinka ee dalalka ay hore u caawiyeen iyo fikirkooda hann aanka ugu fudud ee doorasho qof iyo cod dalka uga hirgeli karto.
5. Guddiga waxa uu ururada bulshada ray idka u bandhigay Hindise Sharciyeedka doorash ooyinka waxa uuna ka dhagaystay aaraa’dooda iyo afkaarta ay ka qabaan qodobada sharcigan.
6. Guddi ga waxa uu sida si la mid ah u bandhi gay hindise Sharciyeedkan Xisbiyada Siyaasdeed ee KMG ah ee ka jira dalka waxa uu wadatashi dhowr jeer ah kala yeeshay qodobada ku jira hin dise sharciyeedka iyo hannaanka doorasho ee ugu habboon inuu dalka ka hirgelo.
7. Guddiga waxa uu socdaal shaqo kusoo kala bixiyey Dowlad Goboleedyada Dalka asaga oo ka soo dhagaystay mas’uuliyiinta Siyaasadeed, Urur ada Bulshada iyo Odayaasha dhaqankaba ra’yiga ay ka qabaan qodobbada sharcigan, nidaamka doo rasho ee ugu habboon ee ka hirgeli kara dalka. Wax aa uu sidoo kale Madaxweynayaasha, Golaha Wasi irada iyo Golahooda Baarlamanka ka dhagaystay xaaladaha amni ee deegandooda iyo sida ay suurtagal ku tahay qabashada doorasho qof iyo cod 2020/2021 iyo caqabadaha jiri kara.
8. Guddiga waxa uu si gaar ah ula kulmay Oda yaasha iyo Siyaasiyiinta kasoo jeeda Gobollada W aqooyi (Somaliland) ee dalka. Waxayna isla eegeen duruufaha gaarka ah ee ay qabaan iyo habka ugu habboon ay doorasho ku geli karaan murrashaxiinta kasoo jeeda deeganadaas. Guddiga waxa uu sida kale weydiiyey fikradaha ay ka qabaan sharcigan.
Tell: +252 (0) 615548235 Email: election. Commit tee@parliament.gov.so website: www.parlia ment.gov.so
Natiijada Kulammada ee Guddiga Gud digu dhagaysiga iyo wada tashiga dheer oo uu la ye eshay qaybaha kala duwan ee kor ku xusan ka dib waxaa usoo baxay qodobada hoos ku xusan:
1. In Hindise sharciyeedkan loo baahanyahay in la gu sameeyo wax ka beddel lagu waafajinayo Dast uurka KMG ee JFS, Sharciga Axsaabta, Sharciga la gu dhisay GMDQ iyo Shuruucda kale ee dalka.
2. In qodobbada ka mid sharcigan ee iska hor imaanaya an loo baahan yahay in la is waafajiyo.
3. Waxa ay dhamaan dhinacyada kala duwana ee aan la kullanay walwal ka muujiyeen nidaamka doo rasho ee ku dhisan ergooyinka ee lagu soo galay doorashooyinkii 2016 ayagoo ku sababeen aya amni darrada jirta inay tiro kooban ahaayeen ayna horseedi karaan musuqmaasuq.
4. Waxa ay dhinacyada kala duwan intooda ba dan walaac ka muujiyeen gaar ahaan qaybaha kala duwan ee dowlad goboleedyada in hannaanka doo rashada nidaamka matelaadda isu dheelitiran ee liiska xiran (proportional representation closed list) uusan ahayn mid ku haboon marxaladda dalka marayo uusanna ka hirgeli karin Dalka. Waxa ay si gaar ah farta ugu fiiqeen in hanaankan dhalin karo lumitaanka miisaanka awood qaybsiga ee horay ummadda Soomaaliyeed ugu heshiisay, waxay kaloo ay farta ku fiiqeen iney adag tahay qabsoomi dda doorasho qofiyocod ah xilligan.
5. Dhammaan Dowlad Gobolleedyada iyo saam ileyda kale ee siyaasadeed waxay si wadajir ah u sheegeen in doorashada ku dhacdo waqtigii loogu talagalay.
6. Dhinacyada aan la kulannay waxay aad u adkeeyeen in waqtiga la joogo marna laga guuri karin hannaanka awood qeybsiga ee horey loogu heshiiyey ee 4.5, tilaabo kasta oo hannaankaas wax u dhimeysa ay keeni karto qalalaaso siyaasadeed iyo amni darro. 7. Dhinacyada aan la kulanay dham maa ntood waxay soo jeediyeen in doorashada qof iyo cod aysan hirgelin karin ayadoon la diyaarin qodobadan hoos ku xusan: ; EEG BOGGA 6AAD
a. Dhameystirka Dastuurka; b. Midn imadda dhammaan dalka oo idil;
c. Diyaarinta Sharciga Jinsiyadaha; d. Muwaad ini inta Soomaaliy eed tirakoob rasmi ah loo samee yo
e. Sugidda xud uudaha degmooyinka iyo goboll ada dalka. Nidaamka (Modelka) Doorashada Hin dise sharciyeedka waxaa gundhig u ah oo uu ku dhisan yahay saddex mabda’ oo kala ah;
(a) in doorashadu ka dhacdo me elkasta oo dal ka ah isaga oo dalku yahay hal deegaan doorasho (Single national Constituency),
(b) In la ilaaliyo dheelitiranka saami qaybsiga kuraasta beelaha.
(c) In doorashada lagu saleeyo nidaamka mata aldda nisbada liiska xiran (Proportional Represe ntation, PR Closed list) oo la dooranayo Xisbiga oo keliya, xisbiguna yahay midka go’aaminayo liis tada murashaxiinta xisbiga iyo siday ku soo baxa yaan. Sida muuqata modelka nisbada isudheelitirka liistada xiran (PRClosed List) suuragal kama dhig ayo in la helo dheellitiranka saami qaybsiga mataal adda kuraasta beelaha dhexdooda oo lagama maa rmaan u ah nidaamka heshiiska bulsho ee soomaali yeed iyo matalaadda loo simanyahay. Sidaa dart eed saddexdan mabda’ islama jaan qaadi karayaan.
Tell: +252 (0) 615548235 Email: election. committeee@parliament.gov.so website: www.parlia ment.gov.so
Diidmada Nidaamka Liistada Xiran Dhammaan qaybihii bulshada ee kala duwanaa ee guddigu tala ka soo ururiyey sida; Axsaabta, ururr ada Bulshada, Dowlad Goboleedyada iyo indheer garadka Soomaaliyeed waxay si isku mid ah u dii deen iyagoo walaac weyn ka muujiyey in nidaam kan mataaladda nisbada liiska xiran yahay, wax ku cusub oo aan si sahlan loo fahmi karayn, caddaalad sugi karin, islamrkaana xaqiijinaynin nidaamka awo od qaybsiga ee bulshada Soomaaliyeed. Waxyaaba ha kale ee lagu sababeeyey inuusan ku habboon eyn xaaladda dalkeenna,waxaa lagu sababeeyey; inuu nidaamkani daciifinayo isla xisaabtanka iyo xiriirka mataaladda xildhibaanka ee deegaankiisa, dhiirigelinayo xisbiyada ama ururrada xagjirka ah, abuurayo khalkhal dheelitirka matalaadda deegaam ada iyo awood qaybsiga qaybaha bulshada. Wuxuu abuuri karaa deganaansho la’aan siyaasadeed iyo in la waayo xukuumad majority ku leh Baarlamaan ka.
XULASHADA NIDAAMKA AQLABIYADA
1. Guddigu markuu garwaaqsadey iney doorasho caddaalad ah oo daahfuran inay dalka ka dhacdo ay lagama maarmaan tahay.
2. Guddigu markii uu dhegeystey kana baara ndegey isbarbardhigga nidaamyada doorasho ee ay soo jeediyeen hay’adaha cilmi baadhistu.
3. Gudd igu markii uu su’aalo u jeediyey wasaa radda ay khuseyso ee ku saabsan modelkan door asho iyo dhaliilaha ka soo bixi karo iyo habka uu ula jaan qaadi karo marxaladda dalka, wada tashi dhee rna ka sameeyeen arriinkaa.
4. Guddigu markii uu dhegeystay walwalka xoog ga leh ee ay ka muujiyeen intabadan dhinacyadii uu la kulmay Guddigu hannaanka mataaldda isu dhee litiran ee liistada ku salaysan, si gaar ah markey far ta ugu fiiqeen dhibaatada uu u keeni karo hann aanka isu dheelitrka saamiqaybsiga siyaasadeed. Guddigu wuxuu si wada jir ah isugu raacay in nidaa mka (modelka) doorashooyinka ee dalka ku habb oon yahay. Nidaamka Aqlabiyadda ah (Majoritarian
System) kuna salaysan in kursi kastaba gaarkiis loo doorto (Single Member popularity "SMP”) ama hab ka loo yaqaan horreeyaa guuleysta (First Past The Post "FPTP”) oo lagu kala baxo codka haldheeriga ah ee tartanka kursi deegaanka. Astaamaha Nidaa mka Aqlabiyadda Nidaamkan Aqlabiyadda hal kii kursi ah (SingleMember Popularity – SMP). Marka loo eego nidaamyada kale waa midka ugu sahlan wuxuuna leeyahay astamahan hoos ku xusan; Halkii kursiba gaarkiis ayaa loogu tartamayaa, Sida magaciisa ka muuqata FPTP. codeynta koowaad ayaana lagu kala baxayaa, Murashixii u codbadan ayaa kursiga ku guuleysanaya. Codbixiyuhu hal murashax ayuu ka dooranayaa liistada Murashaxii nta ee kursiga. In la xaqiijiyo dheellitiranka saamiq aybsiga. matalaadda Bulshada ee golayaasha Baarlamaanka; In ay dhacdo doorasho ku salaysan xisbiyo. In dadwaynaha deegaanka degan ay u sim an yihiin u codeynta murashaxiinta. In codbixiyayaa sha wax dooranayaa ka iman karaan deegaanka go obta doorashada ee heer gobol ama dawlad gobo leed ah.
Tell: +252 (0) 615548235 Email: election.committee @parlia ment.gov.so website: www.parliament.gov.so
Faa’idooyinka Nidaamka Aqla biyadda Habkani wuxuu si xoogleh u abuurayaa matalaadda deegaanka ee ka dhaxaysa xildhibaa nka iyo bulshada deegaanka. Waa nidaam muujin aya lahaanshaha kursiga iyo mataalaadda codbixi yaha isla markaana xoojinayaa la xisaabtanka xil dhibaanka. Waa nidaam aad u sahlan oo si fudud loo fahmi karo. Waa nidaam toos ah degdeg ah oo natiijadiisu aysan muran lahayn. Codbixiyaha wu xuu si cad u kala xulanayaa marashaxiinta. Maadaa ma kursigu deegaamaysanayahy xisbigu wuxuu ku qasban yahay inuu tix geliyo rabitaanka bulshada deegaanka kursiga iska leh. Wuxuu yareynayaa uru rada xagjirka. Wuxuu fursad siinayaa codbixiyaya asha inay kala xushaan murrashaxiinta u dhashey deegaanka oo ay yaqaannaan. Wuxuu dhiirrigelina yaa in la helo xukuumad aqlabiyad ku leh Baar la maanka.
Murashax kastaa wuxuu kusoo baxayaa ama ku hadhayaa codka uu gaar ahaan u helay xisbina ma awooddo inuu codka maamulo ama cid kale uu siiyo.
Maadaama doorashadu tahay mid deegaamays an oo toos ah waxay keenaysaa in dadka muuqda ee dadku rabaan la doorto iyagoonan xisbiga taag eero ka helin. Waxaa loo tartamayaa hab xisbi iya doo kursi kastaba gaarkiis loo dooranayo taasina ay horseedeyso
in la ilaalinayo dheellitiranka metelaadda bulsh ada iyo shacabka dalka oo dhan, waxaa soo baxa ya gole baarlamaan oo oo tartan ku yimid. Habkani waxuu meesha ka saarayaa cilladaha nidaamka nisbada ah ee liistada xiran. Guddiga wuxuu si wa dajir ah ugu dadaalay in Hindise Sharciyeedka dibuhabeyn ku sameeyo kadibna ku soo celiyo wixii nuxur ahaan, qaanuun ahaan iyo mab’da ahaan ee la hareer maray, kadibna uu soo saaro sharci qey baha kala duwan ee ummadda Soomaaliyeed iyo saamileyda siyaasadda meel kasta oo ay joogaan ku qancaan, bacdamaa uu Dastuurku Qodobka 22 (2) uu qeexayo in muwaadinku leeyahay xaq dastu uri, sidaas awgeed waa inuu jiro Sharci saameeya nidaamka iyo axkaamta doorashada iyo wixii la xiriira.
Hindise Sharciyeedka Doorashooyinka Qaran ka oo ka kooban Todaba (7) Cutub iyo Kow iyo Lix dan (61) Qodob, Guddigu markuu dulmar ku samee yey Hindise Sharciyeedkaasi waxaa u soo ifbaxay iney jiraan qodobbo qaar u baahan in la waafajiyo Dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka, isla mar kaana la saxo qodobbada iska soo horjeeda ee isla sharcigan. Haddaba Guddiga, isagoo raadraacaya awaamiirta ku xusan Qodobka 47aad ee Dastuurka iyo qodobbada 84 (3), 85 iyo 86 ee Xeer Hoosaadk a Golaha Shacabka, wuxuu si dhab ah u falanqeey ey diiraddana u saaray qoddobbada ugu muhiimsan ee la xiiriira Hindise Sharciyeedka kuwaas oo kala ah:
1. Qodobbada qaar in la waafajiyo Dastuurka, Sharciga lagu dhisay GMDQ iyo Sharciga Xisbiyada Siyaasadeed;
2. Qodobbo qaar oo ay tahay in GMDQ ay ku soo saaraan Xeer Nidaamiyeyaal;
3. Qodobbo mu hiim ah oo u baahan in sharciga lagu soo kordhiyo; iyo
4. Qodobbo qaar oo ku xusan Dastuurka iyo Sharciga GMDQ in laga tirtiro. Tell: +252 (0) 615548235Email: election. committee @parliament .gov.so website: www.parliament.gov.so FG. Dham maan qodobbada qaabka loo tiray, qaabka waxkabeddel loogu sameeyey, qaabka wax loogu soo kordhiyey, guddigu wuxuu ku muujinay shaxda hal kan ku lifaaqan kana kooban saddex khaanadood
(1) khaanad ah Hindisaha ay soo gudbisay Xukuumadda,
(2) khaanad ah warbixinta akhrinta 2aad ee Guddiga; iyo
(3) khaanad ah faallo. M.ne Guddoomiye, bacd amaa Guddiga daraasad dheer ka sameeyey Hind ise Sharciyeedka, dhan walbana ka eegay mab aadii’diisa, nuxurka iyo aasaaskiisa wuxuu garwaa qsaday in Hindise Sharciyeedka la soo waafajiyey Dastuurka, iyo shuruucda kale ee dalka u yaala una baahan in Golaha Shacabka waajibaadkiisa ka guto, maadaama xilligan dadka iyo dalkuba u baahan yihiin sharciga hagaya Doorashada.
Sidaa darteed, M.ne Guddoomiye wuxuu Gudd iga si sharaf iyo qaddarin leh kaaga codsanayaa in Hindise Sharciyeedkan aad ku darto ajendaha ugu soo horeeya si loo mariyo akhrinta 2aad. Mahad sanid. Xil. Cabdullahi Abuukar Xaaji "Eng. Carab” Guddoomiyaha Guddiga kmg ee Diyaarinta Sharci ga Doorashooyinka Qaranka
CABDI QEYBDIID OO SHAACA KA QAADAY CAQAB AD AY KALA KULMEEN KHILAAFKA DF IYO MAAMUL GOBOLEEDYADA
Kulankii wadajirka ahaa oo ay Shalay yee sheen Xildhibaannada 2da Aqal ee BFS, isl amar kaa na ay goobj oo ga ka ahaaye en 186 Xildhiba an iyo Se nator, ayaa waxaa loo gu qey biyey Sharc Iga doora shooyinka.
Sharcigaan ayaa wax aa dhawaa Md.n soo gebagabeeyey diyaarint iisa Guddiga KMG ah ee sharciga doora sho oyinka,guddigaas oo ka koobnaa 15 Xubnood oo laga soo xulay xil dhibaanna da Golaha Shacabka.
Dhanka kale Cabdi Xasan Cawaale Qe ybd iid oo ah G/Guddiga dib u eegista das tuurka ee2da gole ee baarlamaanka Soo maaliya oo kulankaan ka hadlay ayaa she egay inay jiraan caqabado hor taagan dib u eegista Dastuurka.
Md.Cabdi Qeybdiid ayaa sheegay in Khil aafka ka dhaxeeyo Dowladda Dhexe iyo Maa mul Goboleedyada uu caqabad ku noqday sha qadii dib u eegista Dastuurka.
Isagoo ku sheegay qodobada soo socdo in ay caqabad ku noqdeen dib u eegista Dastu urka oo aan weli sidii loogu talagalay aan lo oga doodin
Khilaafka Dowladda iyo Maamul Gobole ed yada la tashiga bulshada Soomaaliye ed oo uusan wada gaarin wadatashiga da stuurka Arimaha Maaliyada ee ku shaq eeyo Guddiga oo aan la helin.
Mudo xileedka baarlamaanka 10aad oo mudo xileedkiisa siidhamaanayo iyo shaqooyi nka horyaaha oo badan
Ugu dambeyntii Cabdi Qeybdiid ayaa xus ay inay jiraan caqabado uu ka gudbay gud di ga uu madaxda u yahay, wuxuuna tusaale aha an usoo qaatay xalkii laga gaa ray khilaafka u dhaxeeyey labada aqal ee Baa rlamaanka Soomaaliya.